कर्फ्यू जारी गरिएको ललितपुरको पछिल्लो अवस्था के छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
कर्फ्यू जारी गरिएको ललितपुरको पछिल्लो अवस्था के छ ?
काठमाडौंः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ललितपुरले चक्रपथ क्षेत्रभित्र कर्फ्यू आदेश जारी गरेपछि ललितपुरको अवस्था सामान्य बनेको छ ।
रातो मच्छेन्द्रनाथको रथयात्रालाई लिएर बिहीबार पुल्चोक क्षेत्रमा दिनभर तनाव भएपछि प्रशासनले शुक्रबार बिहान ४ बजेदेखि राति १० बजेसम्म कर्फ्यू आदेश जारी गरेको थियो । बिहीबार रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तान्ने विषयमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले कर्फ्यू लगाएको हो ।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग ललितपुरका प्रवक्ता एसएसपी सुशीलकुमार यादवले कर्फ्यूपछि अवस्था सामान्य बनेको बताए । उनले कर्फ्यूको पूर्ण पालना भएको जानकारी दिए । बिहीबार रथ तान्ने समूहले ट्राफिक प्रहरीलाई कुटपिट गरेका थिए । तिनीहरूमध्ये नौ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
अहिले क्षमा पूजा भइरहेको र अवस्था सामान्य रहेको छ । त्यस्तै हिजै स्थानीय सरोकारवाला, जनप्रतिनिधिहरू समेत सहभागी बैठकले घटनामा स्थानीय गुठी वा कुनै समूहको सहभागिता नभएको भन्दै घटनाप्रति खेद व्यक्त गरेका थिए । साथै बैठकले यो वर्षको भोटो जात्रा नगर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस ललितपुरमा थप ४ कोरोना संक्रमितको मृत्यु
ट्याग्स: कर्फ्यू, रथयात्रा, रातो मच्छेन्द्रनाथ, ललितपुर